जनतासँग जनप्रतिनिधि – Online Jagaran
Category: जनतासँग जनप्रतिनिधि
सुर्खेत, ७ पुष (जागरण) । सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरुले आफुहरुको समस्या समाधान कहिले हुेने हो भनी प्रश्न गरेका छन् । कर्णाली रैबारको स्तम्भ जनतासँग जनप्रतिनिधिमार्फत यस्तो प्रश्न गरेका हुन । साथै अन्य नागरिकहरुले विभिन्न गुनासाहरु गरेका छन । त्यसको जवाफ सुन्नुहोस अडियोमा ।
सुर्खेत, ३ माघ (जागरण) । केहि वडालाई बालबिबाहमुक्त घोषणा गरेको दैलेख दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउनेगरी काम अगाडी बढेको जनाएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने भन्दै शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखिएको जनाइएको छ । यसै विषयमा रहेर कृति सुवेदीले नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । सुन्नुहोस अडियोमा कुराकानी……
सुर्खेत, २५ पुष (जागरण) । जनताको घरदैलोमै सरकार पु¥याउने र सेवा सुविधा गाउँमै पुर्याउनेगरी स्थानीय सरकारहरु गाउँगाउँ पुगे । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्मै पुग्ने भनियो तर डोल्पाका केहि स्थानीय तहका नगरिकहरु सिंहदरबार देख्न जिल्ला सदरमुकाम नपुगी सुखै छैन । दैनिक कामकाजका लागि गाउँले सदरमुकाम दुनैमै पुगिरहेका छन् । जिल्लाका आठमध्ये चारवटा स्थानीय तहका कार्यालयको काम दुनैबाट […]
सुर्खेत, १९ पुष (जागरण) । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रसैनी नगरपालिकाले ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा नास्पती खेती गर्न शुरु गरेको छ । बाँझो रहेको जग्गालाई उपयोग गर्ने भन्दै नगरपालिकाले यस्तो नीति ल्याएको हो । नगरपालिकाले अहिले नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक वडामा पाँच–पाँच हेक्टरकाले दरले मेल कलमिबाट नास्पति बनाउन लागेको हो । त्यतीमात्र नभएर नगरपालिकाले अहिले सडकको दायाँ–बायाँ एक […]
सुर्खेत, १६ पुष (जागरण) । जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले अहिले एक देखि ६ वडाका ३१ वटा गाउँमा नयाँ सडक बाटो पुर्याएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले यो वर्ष सबै वडा गराबेल गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले हिमपातका कारण ठुला विकासका कामहरु अगाडि बढाउन नसकिएको र साना विकासका केहि योजनाहरु भएपनि ठुला विकास निर्माणका योजना हिमपात पछि […]
सुर्खेत, १५ पुष (जागरण) । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब २ बर्षभन्दा धेरै भएको छ । निर्वाचन ताका जनताले विकासका मुल फुट्ने अपेक्षा लिएका थिए भने निर्वाचन जिते विकासले फड्को मार्ने, गाउँमै रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुने, गरिबी कम हुने, सेवा शुविधा घरघरै पुग्ने बताइएको थियो । तर त्यो सबै अपेक्षा पुरा हुन सकेको छैन् । […]
पाँच लाखभन्दा तलका योजनामात्र उपभोक्ता मार्फ बनाउछौः अध्यक्ष बुढा
१३ पुष २०७६, आईतवार ०७:३३ December 29, 2019 जागरण
सुर्खेत, १३ पुष (जागरण) । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले पाँचलाख भन्दा माथिका योजना उपभोक्ता मार्फत नबनाउने निर्णय गरेको छ । पाचँ भन्दा तलका विकास कामलार्ई मात्रै उपभोग्ता मार्फत गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । सुन्नुहोस् सहकर्मी कृति सुवेदीले गरेको कुराकानी अडियोमा….
१० पुष २०७६, बिहीबार ०६:४० December 26, 2019 जागरण
जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र काँहा राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा आलोचना भइरहेको छ । तर गाउँपालिकाले भने अबको चार– पाँच महिना भित्र गाउँपालिकाको केन्द्र टुंगो लाग्ने जनाएको छ । सहकर्मी नन्द कठायतले गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर केसीसँग गरेको कुराकानी अडियोमा सुन्नुहोस…….
नगरसभाबाट महत्वपूर्ण ऐनहरु पारित गरेका छौः उपप्रमुख यरी
७ पुष २०७६, सोमबार ०६:४४ December 23, 2019 जागरण
सुर्खेत ७ पुस (जागरण) । सल्यानको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाले छैटौ नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । छैटौ नगरसभाबाट तिनवटा कार्यविधि पासगरेको जनाएको छ । नगरपालिकाले न्यासम्पादन, वजेट विनियोजन लगायतका कार्ययोजना बनाएको जनाएको हो । सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका उपप्रमुख मन्जु यरी सँगको कुराकानी सुन्नुहोस् अडियो……